Simbisa Kutengesa Kwako uye Kubudirira neaya matanhatu Hacks | Martech Zone
Mazuva ese, zvinoita sekunge tine shoma nguva yekutarisira basa redu. Zvinopokana nekuti kune akawanda maapp, hacks uye zvishandiso zvinotibatsira kuchengetedza nguva mazuva ano. Zvinotaridza senge iwo matipi uye manomano ayo anofanirwa kutiponesa nguva anotora mutero mukuru pakubudirira kwedu.
Hedzino dzimwe dzenzira nemidziyo yandinoshandisa kuzvichengetedza pamwe nechikwata changu chekutengesa nguva yakawanda nekuvandudza kugadzirwa kwedu kwese.
Kubiridzira 1: Tevera Nguva Yako Nechitendero
Ndanga ndichishanda ndiri kure kweanopfuura makore gumi ikozvino uye ini ndinonyangadza zano rekutevera yako nguva iwe uchishanda. Handisati ndamboishandisa kuongorora vashandi vangu, asi ini ndakazozviona inogona kubatsira chaizvo kune kumwe kunyorera.
Kwerinenge mwedzi, ini ndakateedzera nguva yangu yebasa rega rega randakaita. Pamabasa akaoma sekushanda pane yedu yekushambadzira chirongwa kune chimwe chinhu chakareruka sekunyora email. Ndakakurudzira vashandi vangu kuti vaite zvakafanana kwemwedzi, kune avo pachavo marekodhi. Mhedzisiro yacho yakavhura ziso.
Isu takaona kuti yakawanda sei nguva yedu yakatambiswa pamabasa asina basa zvachose. Kazhinji, takapedza yakawanda yedu yezuva tichinyora maemail uye mumisangano, tichiita shoma basa chairo. Pane imwe nguva patakatanga kutevera nguva yedu, takakwanisa kuona kuti inguva yedu yakawanda sei yakatambiswa. Isu takaona kuti timu yedu yekutengesa yaipedza nguva yakawandisa kupinda mu data muCRM yedu panzvimbo yekutaura kune vanotarisira nekutengesa yedu chikumbiro software. Isu takapedzisira tave kunyatsogadzirisa maitiro edu ekutengesa uye manejimendi manejimendi kufambiswa kwemabasa kuti tiwedzere nguva
Zvirongwa Zvirinani zvinoita kuti iwe ugadzire akajeka, ezvenguva zvadzo mumaminetsi. Zvirongwa zvakagadzirwa neichi chishandiso zviri padandemutande, zvinoteedzereka uye zvinoshandura zvakanyanya. Kuziva kana chikumbiro chikavhurwa kunobatsira iwe kutevedzera panguva yakakodzera, uye iwe uchagashirawo ziviso kana chikumbiro chadzingwa, chakasainwa kana kubhadharwa pamhepo. Shandura kutengesa kwako, kufadza vatengi vako uye kuhwina bhizinesi rakawanda.
Saina Kuti Uwane Zvirongwa Zvirinani Mahara
Kubiridzira 2: Kudya Live Datya?
Kutanga kubva, ini handikurudzire kunyatsodya matatya ehupenyu. Pane chirevo chakakurumbira naMark Twain uyo akati iwe unofanirwa idya rarama datya chinhu chekutanga mangwanani. Nenzira iyoyo, iwe waita chakaipisisa chinogoneka chinhu chinogona kuitika muzuva uye zvimwe zvese zvinoitika zvinogona kunge zviri nani chete.
Yako mhenyu datya ndiro rakaipisisa basa rinogarira pamusoro pezvaunofanira kuita rondedzero. Kwandiri, iri kugadzirisa matikiti ekutsigira vatengi. Mangwanani ega ega pandinovhura laptop yangu, ndinopa awa kana maviri kuverenga nekupindura maemail evatengi. Zororo rezuva rinonzwa kunge mhepo. Kune yangu timu yekutengesa, ini ndinokurudzira kuita zvakafanana. Vanhu vakasiyana vane mazano akasiyana ezvo avo rarama datya ndizvo, saka ini handikurudzire basa chairo, asi ini ndinokurudzira kuita zvakanyanya, zvakaomesesa mabasa mangwanani.
Kubira 3: Zivisa Zvemagariro Zviratidzo zveWebhusaiti Yako
Kuwana zvimwe kutengesa kuburikidza nekushambadzira kunotora nguva nemari. Zvakare, kuuya nenzira nyowani dzekuwana vatengi kunoda kutsvagisa kwakawanda uye kushanda nesimba. Asi pane nzira yekuwana yakawanda yekutengesa usingashandise chero imwe mari yekuwedzera - uchishandisa humbowo hwemagariro.
Iri zano rekushambadzira rakanyatso tsvagirwa uye rakaratidza kuti rinoshanda mune akati wandei maindasitiri akasiyana. Zvichitaurwa zviri nyore, iwe unofanirwa kushandisa yako iripo vatengi 'ruzivo neako brand kuti ugutsikane vatengi vazhinji kushandisa mari newe.
Mhando dzakakurumbira dzehukama hwemagariro dzinosanganisira ongororo, zvibvumirano, zvipupuriro, notisi dzekushandurwa nevamwe vazhinji. Kune dzimwe nzira dzakawanda dzemazuva ano dzakadai sekushandurwa kwezaziso.
Kana iwe uchitova nevatengi vakagutsikana, kushandisa zvavakaona munzvimbo chaiyo pawebhusaiti yako kunogona kukanganisa hukuru pamitengo yako yekutendeuka uye nhamba dzekutengesa. Nekudaro, hapana imwechete-saizi-inokodzera-mhinduro yese uye zvinotora kumwe kuyedza kuti uwane chaiyo yehukama humbowo fomula. Nhau dzakanaka ndedzekuti, zvinoshanda uye zvinoshanda chaizvo.
Hack 4: Tora Iyo Kutengesa Pamhepo
Mazhinji matimu ekutengesa achiri kushandisa nzira yechinyakare kwavanoda kusangana neiyo tarisiro mu-munhu kuti avhare chibvumirano. Kunyange izvi zviine mabhenefiti mazhinji, kune akati wandei akaderera zvakare. Pese paunobuda kuenda kumusangano, unorasikirwa nenguva yakawanda nemari, usingazive kana musangano wacho uchizotengesa.
Kune akawanda maturusi mazuva ano anoita kuti zvive nyore kuvhara kutengesa kure. Conferencing maapplication akadai se Zoom inobvumidza iwe kuti ufone yevhidhiyo usati waronga musangano mumunhu. Nenzira iyoyo, kunyangwe ukasawana kutengesa, iwe unongorasa maminetsi gumi neshanu yenguva yako panzvimbo pezuva rese rekushanyira tarisiro.
Hack 5: Wirirana Yako Ekutengesa Uye Ekushambadzira Matimu
Mumakambani mazhinji andakashandira, maitiro ekutengesa akaomeswa nechikonzero chimwe chete. Dhipatimendi rekutengesa rakanga risingazive zvaiitwa nedhipatimendi rekushambadzira nezviri mukati maro uye zvekushambadzira uye panguva imwecheteyo, iro dhipatimendi rekushambadzira harina ruzivo nezve izvo zvinosangana nekutengesa mazuva ese. Nekuda kweizvozvo, ruzivo rwakawanda runorasika uye madhipatimendi ese ari kuita zvisirizvo.
Kuchengeta zvikwata zvese zviri papeji rimwe chete, zvakakosha kuve nemisangano yenguva dzose uko timu yekutengesa neyekutengesa inotungamira uye nhengo dzinogona kugara pamwechete dzichikurukura zviri kuitika mudhipatimendi rega rega. Kushambadzira kunofanirwa kuziva nezve kudyidzana kunoitwa nevatengesi zvakare nevatengi. Panguva imwecheteyo, kutengesa kunofanirwa kuziva nezveazvino zvigadzirwa zvakatarisana nevatengi kuitira kuti vagone kuenzanisa maitiro avo pavanosangana netarisiro nyowani. Zvese zvinotora maminetsi gumi neshanu pavhiki uye zvese zvako kutaurirana kwechikwata uye kugadzirwa kuchavandudza.
Kubiridzira 6: Iva Akanyanya Kuomarara Nemisangano Yekutengesa
Kana mumwe munhu kubva kuchikwata chekutengesa aine musangano neanogona kuve vatengi, vane nguva yese pasi. Nekudaro, kumisangano yemukati, nguva yedu ishoma kwazvo. Rangarira iyo nguva yekutevera yatakaita? Takadzidza kuti taipedza maawa mana vhiki rega rega pamisangano isina zvayainyatsoita pazvinangwa zvedu zvekutengesa.
Mazuva ano, tinogumira misangano yedu yese kusvika maminetsi gumi nemashanu. Chero chipi zvacho chinopfuura icho chinofanirwa neemail uye chiratidzo chekuti ajenda yemusangano haina kusetwa nemazvo. Yedu mushandi kukoshesa apfuura nepadenga uye tinochengetedza matani enguva mazuva ano - nekuda kweiyi yakapusa kubira.
Boka rakakura rekutengesa rinofanirwa kune kambani inoda kuwedzera mari yavo uye mukana wekukura. Aya anongova emamwe matekinoroji makuru atinoshandisa kuona kuti timu yedu yekutengesa inobudirira sezvinobvira, uye ndinovimba unozviwana zvichibatsira. Pamwe chinonyanya kukosha kutora apa ndechekuti haazi ese ekugadzirwa kubheka anodzikira kune otomatiki uye yepamusoro tech - iwe unogona kuwana zvinoshamisa zvinhu nekungochinja mamwe ako maitiro uye maitiro.
Tags: kutendeuka noticeszvibvumiranokushambadzira uye kuenzanisa kwekutengesamusangano wepamhepomadhimoni epamhepokutengesa onlineproposalchikumbiro softwareReviewskutengesa uye kushambadzira kuenderanamisangano yekutengesakutengesa kwekutengesachikumbiro chekutengesaZvirongwa Zvekutengesayekutengesa yekuteveramumagariro uchapupuUchapupu
Adam Hempenstall ndiye CEO uye Muvambi weZvirinani Zvirongwa, yakapusa zano software yekugadzira yakanakisa, yakakwira-kukanganisa zvirevo mumaminetsi. Zvaakabatsira vatengi vake paZvirinani Zvirongwa kuhwina $ 120,000,000 + mugore rimwe chete, akatanga chirongwa cheProposal Kunyora iyo yekutanga kwaanogovana bhizinesi rezano maitiro akanakisa.